फिल्म छाडेकी निरुताको डिमाण्ड ५ लाख? - Experience Best News from Nepal
फिल्म छाडेकी निरुताको डिमाण्ड ५ लाख?
अभिनेत्री निरुता सिंहको व्यस्तता अहिले निकै लोभलाग्दो छ । धेरै निर्माता निर्देशक उनलाई फिल्ममा चरित्र अभिनेत्रीमा लिन तँछाड-मछाड गरिरहेका छन् । दशक अगाडिकी निर्विकल्प अभिनेत्री उनी भटाभट फिल्म फ्लप हुन थालेपछि करीब ८/९ वर्ष काँचको पर्दाबाट टाढा रहेकी थिइन् । ‘इन्टेरियर डिजाइनिङ’ सिक्न भन्दै मुम्बई हानिएकी उनी लामो समय उतै बसिन् ।
यस वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘नाइँ नभन्नू ल ५’ बाट निर्देशक विकासराज आचार्यले उनलाई कमब्याक गराए । भूमिका छोटो भए पनि उनको अभिनयले दर्शकलाई बाँध्यो । यो फिल्मपछि अहिले उनको हातमा फिल्मको लस्कर छ । ‘गर्छु’ भनेका केही फिल्म उनले व्यस्तताका कारण छाडि पनि सकिन् । ‘लभ स्टेशन’ उनले छाडेको फिल्म हो ।
हालै उनले महसञ्चारको निर्माणमा बनेको फिल्म ‘दाल भात तरकारी’ को छायांकन सकिन् । यसमा उनी बरिष्ठ हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यको श्रीमतीको भूमिकामा छन् । यो फिल्मपछि उनको पाइपलाइनमा एक फिल्म थियो, ‘हजार जुनीसम्म’ । तर, उनले उक्त फिल्मबाट हात झिकेकी छन् ।
हाल सिक्किममा छायांकन भइरहेको फिल्ममा उनको ठाउँमा निर्माण टिमले अभिनेत्री सञ्चिता लुइँटेललाई अनुबन्ध गरेको छ । आफूलाई कमब्याक गराउने निर्देशकको फिल्म उनले छाड्नुको पछाडि पारिश्रमिकमा कुरा नमिलेर बताइएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार, उनले उक्त फिल्ममा ५ लाख पारिश्रमिक माग गरेकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार, उनलाई रोल पनि चित्त बुझेको थिएन । ‘हजार जुनीसम्म’ मात्र होइन उनले सुदर्शन थापाको निर्देशन रहने फिल्म ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’ पनि पारिश्रमिकमा कुरा नमिलेपछि गरिनन् । उनले ५ लाखमाथि डिमाण्ड गरेकी थिइन् । उनलाई अफर गरेको रोलमा सुदर्शनले अभिनेत्री गौरी मल्ललाई अनुबन्ध गरेका छन् ।